संघर्षशिल नारीको कथा : ‘सलाम छ ती आमालाई’ - SatyaPatrika
संघर्षशिल नारीको कथा : ‘सलाम छ ती आमालाई’
२०७८ फाल्गुन २४, मंगलवार प्रकाशित
लेखक – बिष्णु गुरुङ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर ५ मा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।
घटना केही दिन अगाडिको हो । म आफ्नो नियमित सेवाका लागि कार्यकक्षमा थिए । सानो कार्यालय सिमित भवनहरू । त्यसैबाट सेवा दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यत । तै पनि सेवा दिईरहेका थियौं ।
धेरै सेवाग्राहीकोबिच सेवा दिईरहदा मेरा आँखा दुईजना महिलाहरूलाई हेरीरहेका थिए । चिसो मौसममा पनि पातलो ब्लाउज, नकोरेको कपाल, कपालमाथि पातलो पछ्रयउरा अनी फिता हालेको चप्पलमा करिब ५०/५५ बर्षकी ती महिला । उनको अनुहारको रेखा, भाव , शरिरको बनावट र पहिरन हेर्दा लाग्दथ्यो, उनी कडा परिश्रम गर्ने श्रमजिवि महिला हुन । उनको साथमा लगभग १९/२० बर्षकी नानी थिइन । त्यसैमा चिसो पनि राम्रोसंग छेक्न नसक्ने पहिरनमा ।
अनुहारमा केही डर त्रास भयसंगै जमिनतिर नियाली रहेकि ती नानी म नजिक आउन समय लागेका कारण म आफै उहाँहरू नजिक पुगे । उहाहरूसंग कुरा गर्न थाले । कुराकानीका क्रममा थाहाँ भयो कि उनीहरु दुबै जना आमा छोरी हुनुहुदो रहेछ।
कुराकानी गर्दै गर्दा थाहाँ भयो । ती सानी नानीका समस्या धेरै थिए । तर केही समस्या आमाले भनेता पनि मुख्य समस्या भने आमाले पनि भन्न सक्नु भएन । मैले आमा छोरीलाई मात्रसँगै राखेर कुरा गरेका कारण आफै प्रश्न गरे । नानीको महिनावारी पनि बन्द भएको हो ? त्यसपछि नानीको मुखबाट कुनै प्श्नको उत्तर आएन । तर आमा उत्तर दिनु हुँदै थियो । नानीका जमिनतिर निहुरीएर हेरीरहेकी थिइन ।
मेरो प्रश्नमा आमाको उत्तर आयो । हजुर नछुने भको छैन, पहिला पनि महिनावरी रोकिन्थ्यो । समयमा महिनावारी हुदैन । उ बिरामी छ। मलाई समस्याको नजिक पुगेजस्तो लाग्यो । उहाहरूलाई राम्रो संग परामर्श गरे । नानू सुस्त मनष्थितिकी रहिछन । आमाले विद्यालयको औचारिक शिक्षा नलिएतापनि व्यवहारीक शिक्षामा भने धेरै पोख्त हुनुहुदोरहेछ । मैले महिनावाी रोकिनुका सबै कारणहरू जाने सम्मका सबै भने । किनकी उहाँलाई दिने सेवाका लागि उहाँलाई निर्णय लिन सजिलोहोस भनेर ।
पिसाब जाँच गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो । जाँच गर्दा थाहाँ भयो उनी गर्भवति रहिछन । म चाहन्थे गर्भवति नभयकोहोस, अरू समस्या होस । सायद उहाँहरू पनि त्यहि चाहनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरू र मेरो चाहे जस्तो भएन । अब परिश्थिति गार्हौ भयो। यएजना नानी जो केही बोल्न, कुरा गर्न, हिड्न डुल्न सकेता पनि उनको बौद्धिक बिकास केही कम भएको कारणले आफा्नो लागि सहि निर्णय लिन सक्ने अबश्थाकी थिईनन । सुस्त मनष्थिति भएको जस्तो लाग्यो । शारिरिक जाँच गरेर हेरे । गर्भ रहेको निश्चित भयो मलाई ।
मैले आमालाई भने नानीको पेटमा बच्चा छ । उनी दुई जिउकी छिन ।अब आमाले आफ्नो बृतान्त सुनाउनु भयो । कति संघर्षरत जीवन हृदयदेखि नै ती आमा प्रति माया लाग्यो । मैले के गर्ने त आमा भन्नुस भने आमा आफ्नो छोरीलाई शारिरिक मानसिक तथा सामाजिक रूपमा स्वस्थ गराउन चाहनुहुन्थ्यो । समग्रमा मेरो स्वास्थ्यको परिभाषा अनुसार :
सरकारको निती अनुरूप म सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक भएता पनि म कार्यरत स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सुचिकृत नभएको कारण र साथमा उहाँहरूलाई कानुनी उपचार पनि आवश्यकता महसुस गरी प्रदेश अस्पतालमा सुर्खेतमा सेवा लिन (0cmc) जानका लागि सल्लाह दिए ।
शुक्रबारको दिन १२ : ३० समय भैसकेको, साथमा एक रूपैया पनि नभयको अबश्था, सुर्खेतमानै बसेता पनि प्रदेश अस्पतालमा गयर हाल सम्म सेवा नलियको हुदा अलमल पर्ने अबश्थाको महसुस गरे मैले । अटोलाई अटोभाडा दियर (ocmc) मा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी संग समन्वय गरि उहाको सम्पर्क नम्मर अटोभाईलाई दियर पठाय उहाहरू पुले स्वास्थ्यकर्मी लाई भेटेको र सेवा लियको कुरा फोन सम्पर्कबाट निश्चित गरे ।
दुई दिन पछी आमा आउनु भयो । अनुहारको भाब हेरे, मनले नभने पनि उहाको ब्यबहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो पिडाबाट मुक्त भयको जस्तो । उहाँ दुई दिनपछि पुन हामिलाई भेट्न सल्लाह लिन आउनु भयो हामिलाई पनि खुसि लाग्यो ।
उहाहरूको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनु हुने मेरा सहकर्मी मित्रहरू, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत (ocmc team) लाई हार्दिक कृतज्ञता व्क्त गर्दछु ।
१. सलाम ती आमालाई जसले आफ्नो कठिन समयमा पनि सहि निर्णय लिन सक्नु भयो । किनकि , हाम्रो समाजमा कतिपय सामाजिक आथिृक राजनैतिक शिक्षित शैक्षिकरूपमा शसक्त , अभियन्ता, अधिकारकर्मिहरूलाई अरूलाई अधिकार र सेवाका लागि सहयोग गरे पनि आफु पीडित भयर बस्नु भयको छ । जो आज नभए भोलिको दिन अबश्य राम्रो हुनेछ भन्ने आशामा बाचिरहनु भयको छ । किनकी एकल महिलालाई समाजले गर्ने व्यवहार समाजमा असह्रय छ।
२. फेरी पनि सलाम छ ती आमालाई जसले समाजको व्यवहार परिवर्तन गर्ने सहास गर्नु भयो किनकि घर परिवार ,समाजले दिएका संस्कारहरू पूरा गरेका अथवा बिवाह बन्धनमा बाधियका दम्पती विशेष गरि महिलाले त आफ्नो गर्भ रहेको कुरा खुलेर भन्न नसक्ने समाजमा हामी छौ । आमाले हिंसाको उपचारको लागि सरकारी संयन्त्रको सहयोग लिनुभयो ।
३. सलाम छ ती महिलाहरूलाई जसले पृतृसतात्मक सोच भयको समाजमा हुर्केका हामिहरू चुनौति दिदै आफु हिंसामा परेपछी कानुनि उपचारका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ । नकाराम्मक टीका टिप्पणि सहेर भयपनि आफ्नो अधिकारका लागि लड्नु भएको छ ।
अपवादका केही कुरालाई समग्र तुलना नगरौ !
सकिन्छ महिलाको अनुभुतिलाई समानुभुति गर्ने प्रयास गरौ !
सकिँदैन नकारात्मक टीका टिप्पणी गरेर हतोत्साहित नगरौ !
हजुरको जीवन अफ्नो लागि कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ ? हजुरको सन्तान छोरी जति हजुरका लागी प्रीय हुनुहुन्छ । अरूका सन्तान उनका पनि मुटुमा टुक्रा हुन्छन । अत उहाँहरूको भावनाको कदर गरौ ।
आमा, दिदिबहिनी, श्रीमतिको सम्मान गर्न परिबर्तन आफैबाट शुरू गरौ ।
सम्पुर्ण महिलाहरूप्रति समर्पित 🙏🙏
यो घटना यस विषयसंग जोडिएका विषय एक महिला, एक स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण नितान्त मेरा व्क्तिगत भावनासंग सम्बन्धि छन् । कृपया अन्य घटनासंग नजोडिदिनुहोला !
लेखक बिष्णु गुरुङ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर-५ मा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।
ब्राउन सुगर र पेस्तोल सहित बाँकेबाट ३ जना पक्राउ
मह यी पाँच चिजसँग सेवन शरीरका लागि विष बन्छ